Global Voices teny Malagasy » Fehezam-boninkazo mena enina sy tapaka lohana ondrilahy: Fandrahonana ho faty ho an’ny gazety Rosiana tsy miankina iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2018 13:46 GMT 1	 · Mpanoratra RuNet Echo Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Lohana ondrilahy notapahana ao amin'ny varavaran'ny gazety Novaya Gazeta ao Moskoa. Hoy ny vakin'ny lahatsoratra “Fanajana ny lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny gazety Novaya Gazeta sy [Denis] Korotkov.” Saripikan'i Anna Artemyeva / Novaya Gazeta, nahazoana alalana.
Voalohany, namela fehim-boninkazom-paty izy ireo. Avy eo, namela lohana ondrilahy notapahana sy fonosana voninkazo mena.
Tamin'ny 17 Oktobra, nahita fehezam-boninkazom-paty sy fampitandremana an-tsoratra ho an'ny iray amin'ireo mpanao gazetiny, Denis Korotkov ny mpiasa. Hafatra naraikitra tamin'ny fehim-boninkazo manondro an'i Korotkov ho “mpamadika ny tanindrazany.” Ny harivan'io andro io, dia nisy mpiasa iraka nanatitra fehezam-boninkazo efatra ho an'i Korotkov miaraka amin'ny fehin-damba fisaonana sy hafatra hoe: “Tsy hanadino anao izahay.”
Ny ampitson'io dia nisy lohana ondrilahy notapahana tao anaty harona miaraka amin'ny fehezam-boninkazo mena enina nipoitra teo amin'ny varavaran'ny Novaya Gazeta. Araka ny fomban-drazana, ireo voninkazo ireo apetraka tsiroaroa amin'ny fasana vaovao any Rosia sy ny firenena Sovietika teo aloha sasany. Nahitana hafatra mampiahiahy ho an'i Korotkov sy ny lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny Novaya Gazeta ihany koa ny harona, izay maniry azy ireo ny “tsara indrindra”.
Tsy misy porofo manamarina hoe iza no ao ambadik'ireo entana ireo, saingy misy ireo andiana hafatra hafahafa mitovy nalefan'ny fampahalalam-baovao mifandray amin'ny Kremlin sy Yevgeny Prigozhin, mpiara-dia akaiky amin'i Vladimir Putin tany amin'i Korotkov. Progizhin dia iray amin'ireo Rosiana 13 nampangain'i Robert Mueller  tamin'ny fanadihadiana mandeha amin'izao fotoana izao momba ny fitsabahan'i Rosia tamin'ny fifidianana amerikana 2016.
Tamin'ny valinteny navoaka manoloana ny fandrahonana, Novaya Gazeta nanoratra hoe:
Ny 15 Oktobra, maro ireo lahatsoratra nivoaka tao amin'ny tranokala, anisan'izany ny RIA FAN, izay mifandray amin'i Prigozhin. Anatin'ity lahatsoratra ity dia nantsoina hoe “mpamadika” i Korotkov, “mpamadika ny tanindrazana” ary “mpiray tsikombakomba amin'ny mpampihorohoro”, raha feno hafatra mitovitovy amin'izany, miampanga an'i Korotkov kosa ny fampahalalam-baovao sosialy. Tahaka ny roboto ny mombamomba ireo mpiserasera amin'izany.
Talohan'ny nidirany tao amin'ny Novaya Gazeta, niasa tao amin'ny Fontanka, tranokalam-baovao tsy miankina iray any Saint-Pétersbourg, izay nanaparitahany tantara marobe momba ny orinasa miaramila miafina mahaleotena antsoina hoe “Vondrona Wagner” izay nanamafy ny fandraisan'andraikitry ny miaramila Rosiana tamin'ny ady an-trano Syriana i Korotkov. Namoaka porofo ny Fontanka sy ny fampahalalam-baovao hafa fa i Prigozhin no lehiben'ny mpanohana ara-bola ny Vondrona Wagner.
Tamin'ny taona 2017, taorian'ny nanoratan'i Korotkov lahatsoratra manasongadina ny fahavoazan'i Wagner tany Syria, dia nanomboka nahazo fandrahonana avy amin'ny loharanom-baovao samihafa izy izay nanery azy handao ny tranony. Tsy nahavita nanadihady ireo fandrahonana ireo akory ny polisy Rosiana.
Ao Rosia, malaza ratsy i Prigozhin noho ny filazàna fa mpanohana ara-bola ny Sampam-pikarohana Aterineto any Saint-Pétersburg izay navoakan'ireo mpanao gazety Rosiana ho mitantana hetsika fisintonana ao amin'ny haino aman-jery sosialy Rosiana talohan'ny nivoahany ho lohatenim-baovao iraisampirenena mikasika ny fandraisany anjara tamin'ny fifidianana Amerikana taona 2016. Tamin'ny taona 2017, nikasa hanasongadina ny tenany ho ampiran'ny fampahalalam-baovao ara-dalàna  izy izay ahitana tranonkalam-baovao maromaro manana fahazoan-dàlana hiasa avy amin'ny fanjakana.
Rehefa nipoitra teo amin'ny varavaran'izy ireo ny lohana ondrilahy, nisioka antso ho an'ny minisitry ny atitany Rosiana sy ny biraon'ny mpampanoa lalàna ny mpiasan'ny Novaya Gazeta, mitaky ny hamotopotorana ireo fandrahonana ireo:
«Доброжелатели» второй день подряд посылают угрозы в адрес журналистов @novaya_gazeta  https://t.co/GaBqxT8s14 @mvd_official , @Genproc , мы требуем расследовать факты угроз и наказать виновных pic.twitter.com/nMN0eJ6KcO 
Nandefa fandrahonana ho an'ireo mpitati-baovaon'ny @novaya_gazeta nandritra ny roa nisesy ireo “mpirary soa”. @mvd_official, @genproc, mangataka ny hanaovana famotorana ireo fandrahonana sy hanenjehana izay nahavita izany izahay.
Taty aoriana, namoaka fanambarana tao amin'ny tranonkalany  ny Novaya Gazeta, milaza fa “miala tsiny noho ny manjò ilay biby” ary nampitandrina manoloana ny “rivo-pankahalana”:
Fitaovam-piadiana mampidi-doza ny fanendrikendrehana amin'izao fotoana izao. Mitarika ady, famonoana olona sy fanafihana ireo mpikatroka sivika sy mpanao gazety ny fanalam-baraka sy ny fiampangana diso .
Mahafantatra tsara ny fiantraikan'ireo taratasiny eo amin'ny tontolon'ny fanaratsiana sy ny fankahalana manjaka ao Rosia ireo olona izay mikarakara ity hetsika ity ao amin'ny media sosialy hamelezana ny Novaya Gazeta sy ireo mpanao gazetiny.
Nolavin'ny fanambaran'ny Novaya ihany koa ny filazana fa tandindonin-doza ny ain'ireo miaramila Rosiana, milaza fa tsy namoaka na inona na inona momba izany izy ireo, na tao amin'ny gazety na tao amin'ny tranonkala.
Nivoaka tamin'ny lohatenim-baovao iraisam-pirenena ny Novaya Gazeta rehefa maty nisy namono tamin'ny taona 2006 i Anna Politkovskaya  . Naorina tamin'ny taona 1993, efa maro ireo mpanao gazetiny maty nisy namono noho ny asany raha oharina amin'ny fampahalalam-baovao hafa ao Rosia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/31/128222/
 andiana hafatra hafahafa mitovy : https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/18/78241-novye-ugrozy-v-adres-novoy-gazety
 nampangain'i Robert Mueller: https://www.apnews.com/cf0e079a1a184ffe82d2de41f0452eb7
 orinasa miaramila miafina mahaleotena : https://www.bbc.com/news/world-europe-43167697
 nanomboka nahazo fandrahonana : https://meduza.io/en/feature/2017/08/30/people-think-it-doesn-t-affect-them-but-it-affects-everyone
 Sampam-pikarohana Aterineto : https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Research_Agency
 hanasongadina ny tenany ho ampiran'ny fampahalalam-baovao ara-dalàna: https://themoscowtimes.com/articles/russias-infamous-troll-factory-is-now-posing-as-a-media-empire-57534
 18 октября 2018 г.: https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1052920951946375168?ref_src=twsrc%5Etfw
 Anna Politkovskaya: https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Politkovskaya